izinkampani Investment izinhlangano ukuthi ngokukhethekile ukuqaliswa collective izimali utshalomali. Umsebenzi wawo oyinhloko ehlukahlukene ukutshalwa kwezimali kanye nokuphathwa kuphothifoliyo utshalomali. Lungase luhlanganise ukuvikeleka kwamasheya issuers nezinye kwezezimali. izinkampani utshalomali Russian ivezwa ngamanani amakhulu. Bona bekwi ukuthengwa nokudayiswa izibambiso, kanye ukuhanjiswa dolobha ezimbonini ethembisa kanye nezinkampani. Kufanele sicabangele izici imisebenzi izinhlangano Russian yalolu hlobo.
Ikakhulukazi imisebenzi izinkampani utshalomali eRussia
ERussia ngempela ngokuvamile umqondo welithi "inkampani utshalomali" kusho inhlangano engokomthetho ngokukhethekile ilayisensi FSFM. It ivumela nomdayisi kanye nomthengisi imisebenzi. Le nhlangano kungase kanyekanye ube isikhungo credit. Ukwenza lokhu kumele ilayisensi CBR. ERussia, lezi zinkampani abizwa ngokuthi amabhange utshalomali. Ukuze uthole ukuthi imiphi ezikhanga kakhulu, kubalulekile ukubona isilinganiso izinkampani utshalomali. Lihlanganisa abameleli onokwethenjelwa kunayo yonke mayelana wemboni. Singacabanga izinkampani utshalomali eRussia isibonelo ezithembisa inkampani "Capital" (Omsk), ukutshalwa kwezimali lapho abalingani ukuletha imali ezinzile.
LLC "Capital" Omsk has Izibuyekezo omuhle ngenxa linokwethenjelwa. inkampani Investment uthola utshalomali ngo-25% ngenyanga kusukela ngabanye nezinhlangano ezingokomthetho. Nentshisekelo kulo, izakhamuzi ungaxhumana ochwepheshe yenhlangano ukuthola izeluleko ukusebenza kohlelo. Ukuphendukela inkampani, ungathola imali ekahle uma utshala imali futhi sithuthukise esimweni sayo sezimali.
"Capital" LLC yasungulwa engaphezu kweyishumi edlule e-Omsk. Phakathi nalesi sikhathi-ke umise ngokwaso njengoba inhlangano ezinzile futhi ithembekile, njengoba kufakazelwa simo izinkampani utshalomali. Ochwepheshe of "Osonhlamvukazi" owayelwazi ezindabeni inzuzo kahle. Bahlale bekulungele Zimisele ukuhlanganyela ulwazi lwabo nabantu egxilile abazimisele ukuba zizinikele imali. Ngakho, amakhasimende ngeke nje akwazi ukutshala imali, kodwa futhi kahle ababeyizazi yonke imininingwane yale nqubo.
Zonke zimali abambisene inkampani abe ezingeni eliphezulu ukuzethemba. Inkampani utshalomali inamagatsha nakwamanye imizi Russia: Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don, Bryansk.
Inhlangano alinaso ubuhlobo kuya mbhoshongo zezimali , kanye nezinkampani inethiwekhi. Ngakho-ke, lidumile imfundamakhwela zimali kanye nezifundiswa. Umsebenzi we inkampani ezindaweni ezilandelayo esemqoka:
Ukunikeza Consulting ezezimali nezomnotho.
Ukunikeza kokubonisana nezinsiza emkhakheni edonsa izikweletu ngezimali abantu ngabanye nezinhlangano ezingokomthetho.
Investment amaklayenti ungakwazi ukukhokha izikweletu, futhi ukwenza ngcono isimo sabo sezimali.
"Capital" LLC, Omsk Izibuyekezo
Ngemva kokuhlaziya izici imisebenzi ye imboni yabatshali-zimali kumele kuphetfwe ukuthi ngokwanele umlingani ethembekile. Ukuthola 25% okomnikelo ngenyanga impela sipho ezilingayo, kodwa uma amakhasimende uyaneliswa inhlangano ezihlinzekayo? Impendulo yalo mbuzo kuzosiza abatshali bezimali abaningi imfundamakhwela, njengoba kubalulekile ngempela ukwazi, bakhetha umlingani onokwethenjelwa noma cha.
Kuyaphawuleka ukuthi "Capital" LLC Omsk Izibuyekezo has kokubili emihle nemibi. Abanye abatshali bezimali bathi inkampani engakhokhi ngendlela esifike ngesikhathi noma azinjalo nhlobo. Ngokusho kwamanye amaklayenti, bathola zonke izinkokhelo ngesikhathi futhi ngokugcwele. Uma ufuna ukutshala imali yabo inkampani "Capital" (Omsk), ukubuyekezwa zazo ungayeki ngqo impendulo imibuzo evela kumakhasimende angaba namandla mayelana nokwethenjelwa, cabanga kabili. etshaliwe ukulahlekelwa ingozi ekhona njalo, ngakho inkampani utshalomali kufanele bakhethe ngokucophelela.
Ukutshalwa kwezimali Aktsii.Vybor Broker ukuhwebelana emakethe Russian
Utshalomali Gross futhi ukubaluleka kwazo nokusetshenziswa yomsebenzi wezomnotho angaphandle
Adsorbent - kuyini? amagama izidakamizwa
Tsaritsyno sigodlo esikhulu: incazelo emfushane
Kukhethwa kwesokudla izihlungi amanzi